Ilmaha dhegaha la'aantu waxay maqlaan hooyo oo dhahay "waan ku jeclahay" markii 1aad kadib maqalka meelaynta maqalka
ACCUEIL » DARYEELKA CAAFIMAAD »Cunuga dhagoolaha ah wuxuu dhashaa hooyadiis oo leh" waan ku jeclahay "waqtiga 1ere ka dib meelaynta maqalka ee maqalka
Sow layaab maaha in la maqlo! Nasiib darrose, waxaan badanaaba iska iloobaan in tan aan qof walba la siinin. Little A'deja Rivers waxay ku dhalatay dhagoolayaal laakiin iyada oo ay ugu wacan tahay teknolojiyadda cusub, waxay maqli kartay waxa ka dhacaya agagaarkooda markii ugu horreysay hal sano.
Qoyskeeda, waxay u ahayd daqiiqad qurux badan oo mudan in la xuso, laakiin gabadha, waxay ahayd waayo-aragnimo cajiib ah inay maqasho hooyadeed oo leh "Waan ku jeclahay" markii ugu horeysay.
Markii A'deja ay heshay maqaar-galinta cochlearkeeda, ma aysan ogeyn waxa la fili karo. Markii ay bilawday inay ogaato dhawaaqyada ku xeeran, waxay ku sii jeedisay feejignaan, iyada oo doonaysa in ay wax walba nuugto.
Shelly Ash, dhakhaatiirta maqalka iyo iskuduwaha koox kicinta dhalmada ee isbitaalka carruurta ee Johns Hopkins Hospital, ayaa leh Waan sharaxay in carruurtu si kala duwan u falcelin karaan:
Mararka qaar way ooyaan maxaa yeelay waa habka kaliya ee ay ku wada xiriiraan, kuwa kalena waa ku qoslaan maxaa yeelay waxay umuuqataa wax lagu qoslo iyaga.
A'deja waxay yeelatay jawaab celin cajiib ah. Way heshay wax walba. Waxaa jirtay daqiiqaddan quruxda badan markii aan wejigeeda ka arki karnay inay ka warhayso dhawaqa, indhaheediina ay iftiimeen.
Hooyada ilmaha, Patricia Shaw, waxay u aragtaa inay tahay mucjiso run ah:
Waxaan ku dhammeeyay ilmada. Waxay la yaab ku noqotay dhammaanteen.
Kulligeen aad ayaan u mahadnaqaynaa oo waxaan uga mahadcelinaynaa Ilaah maalin kasta oo uu siiyay fursadan.
Wax yar kadib markii ay heshay maqaar-galaha, A'deja yari waxa ay bilawday in ay siiso jacaylka muusikada iyo qoob-ka-ciyaarka. Markasta oo ay maqasho heeso, waxba kama tari karto laakiin dhaqaaq, ay qaado heesta. Hooyadiis waxay sheegtey inuu yahay cunug cajiib ah oo xiiso badan, iyo in sifooyinkaasi ay noqdeen kuwo sii muuqda ka dib markay heleen maqaar-galaha.
Waa maxay qalabka lagu rakibo gudaha cochlear?
Shelly Ash waxay sharraxday inay la shaqeyneysay teknolojiyadda noocan ah muddo ka badan 30 sano. Waa wax lala yaabo in la ogaado in caruur fara badan oo dhagoola ay maqli karaan aaladdaan.
Tan iyo bilawgii abuurista cochlear-ga sanadihii 70, aragtida luqadda hadalka ayaa si aad ah u kordhay una soo hagaagtay. Cudurkaan 'neuroprosthesis' waa qalliin qalliin wuxuuna u beddelaa codadka calaamadaha korantada ee kiciya dareemaha maqalka. Dalka Mareykanka, qiyaastii 58 000 ee aaladahaani waxay ahaayeen rogeen dusha dadka waaweyn iyo 38 000 carruurta.
toban sano3d - anatomy khadka tooska ah / Shutterstock.com
In kasta oo bulshada cilmiyayntu ka heleen xamaasad weyn, qalabka abuurista 'cochlear implants' waxay sii wadaan inay abuuraan muran ka dhex dhaca dadka dhegaha la 'qaarkood ee u arka tikniyoolajiyadan inay tahay aflagaado dadweyne.
Si kastaba ha noqotee, waxaa wanaagsan in la ogaado in sayniska uu dadka maqalku liito fursad u siin karo fursad ay ku raaxeystaan ​​dhawaqyada badan ee ku xeeran.
Cabral Libii dévoile l’origine des querelles avec le parti Univers